अक्षर कसरी राम्रो बनाउने ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
अक्षर कसरी राम्रो बनाउने ?
रूपेश कुशवाहा ,हस्तलेखन विशेषज्ञ
हस्तलेखन शिक्षाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । लेखन भाषिक सञ्चार को एक प्रभावकारी कला हो । गीत गाउन, नाच्न, चित्र बनाउन जसरी कलाकारले कठोर साधना गरेको हुन्छ त्यसरी नै हस्तलेखन पनि एउटा कला भएको हुनाले यसका निमित्त पनि उत्तिकै उचित सिप, साधना र लगावको आवश्यकता पर्दछ ।
अहिले हामी उच्च प्रविधियुक्त अत्याधुनिक युगमा छौँ । विद्यार्थीको हात हातमा मोबाइल, ल्यापटप तथा ई–बुक छन् । तर पनि लेखाइको प्रयोग भने घटेको छैन । नेपालमा विद्यार्थीको मुल्याङकनका निमित्त लिइने परीक्षाको माध्यम नै लेखन भएको हुनाले राम्रो हस्तलेखन अति आवश्यक हुन्छ । विश्वका अति समृद्ध र विकसित मुलुकमा पनि विद्यार्थीहरू अधिकांश अङ्कको परीक्षा लेखेर नै दिन्छन् । हामी नेपाली ती राष्ट्रको तुलनामा धेरै पछि परेको हुनाले लेखाई सिपको महत्त्व कम भएको छैन । हाम्रो देशको परीक्षाका रूपलाई हेर्ने हो भने लोकसेवा, विभिन्न सङ्घ संस्थाले लिने परीक्षा, विभिन्न कलेजले लिने परीक्षा आदिको प्रमुख माध्यम नै लेखन भएकोले राम्रो हस्तलेखन सिपको आवश्यकता झन् बढ्दो देखिन्छ ।
हस्तलेखनले विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिकताको विकास अध्ययन गर्न सकिन्छ । हस्तलेखनले व्यक्तिको सोचाई, व्यवहार तथा चिन्तन लगायतका कुरा पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
राम्रो हस्तलेखनका केही फाइदाहरु
– यसले हामीलाई अनुशासित हुन सहयोग गर्छ ।
– यसले हाम्रो व्यक्तित्व विकास गर्छ ।
– यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढाउँछ ।
– यसले हामीमा एकाग्रता बढाउन सहयोग गर्छ ।
– यसले हामीलाई सिर्जनशिल बनाउँछ ।
– यसले शिक्षक ÷ शिक्षिकालाई प्रभावित बनाई उच्च अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
– यसले हामीलाई चिन्तनशील बनाउँछ ।
– राम्रो हस्तलेखनको नियमित अभ्यासले शान्त, सरल, मिहिनेत, परोपकारी, सृजनशील र कर्तव्यवान् हुन मद्दत गर्दछ ।
हस्तलेखन राम्रो बनाउने केही नियमहरू
हामीलाई झट्ट हेर्दा राम्रो लाग्ने अक्षर नियम सङ्गतले सही नहुन सक्छन् । विश्वको अधिकांश भाषाको अक्षरहरूको बनोट सिधा र बक रेखा ऋ बाट नै बनेको हुन्छ । हरेक खालका अक्षरको उत्कृष्ट लेखाइका लागि केही आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । जुन तल दिएको छ ।
– अक्षरको संरचना सही हुनुपर्छ । अक्षर स्पष्ट र सबैले बुझ्ने हुनपर्छ ।
– नेपाली अक्षरहरू लाइन भन्दा मुनि झुन्ड्याएर लेख्नुपर्छ ।
– अक्षरको माथि अनिवार्यरुपमा डिको तान्नु पर्छ ।
– डिको दिँदा सिधा र कापीको तेर्सो धर्को छोपिने हुनुपर्छ ।
– अक्षरमा दिइने मात्रा I, ,ि ी, ु, ू , े, ै, ो, ौ, ं, ँ , ृ ० आदिले अक्षर छुनु हुँदैन र स्पष्ट हुनुपर्छ ।
– डिकोले सबै अक्षर र मात्राले आदिलाई छुनुपर्छ ।
– एउटा अक्षरले अर्को अक्षर एउटा शब्दले अर्को शब्द छुनु हुँदैन ।